प्रकाशित मिति : ५ दिन अगाडी
सामना म्युजिक क्रियसन प्रालिको आयोजनामा राष्ट्रिय साधना म्युजिक अवार्ड २०७६ को आवेदन फारम धमाधम वितरण भइरहेको छ । अग्रजलाई सम्मान नवलाई प्रोत्साहन , कला गला तथा संस्कृति संरक्षणमा हाम्रो अभियान भन्ने मुख्य उद्धेश्यका साथ
प्रकाशित मिति : २ हप्ता अगाडी
जनकपुर । जनकपुरमा आईतबार बिहान भारतीय नम्बरको स्कार्पियोको ठक्करबाट एक वृद्ध घाइते भएका छन् ।वृद्ध राम नारायण यादवलाई बी.आर. ३२ पि.ए. ३३५९ नम्बरको भारतीय सेतो रंगको स्कार्पियोले जनकपुर ७ स्थित वशिष्ठ चौकमा साईकलमा दूध बेच्न
प्रकाशित मिति : ३ हप्ता अगाडी
काठमाडौ । समाजलाई सही मार्गमा लिनुपर्ने व्यक्ति नै चोरीमा संलग्न भए पछि समाज कता जान्छ रु यो विषय किन उठाएको भने काभ्रेको पनौती नगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष विद्यूत चोरीमा संलग्न भएको खुल्न आएको छ । नेपाल विद्यूत
काठमाडौँ । एउटा पुस्ताले अपनाएको राजनीतिक बाटो र विरासतलाई पछ्याउँदै जब सोही परिवारबाट अर्को पुस्ता आइपुग्छ, त्यतिबेला परिवारवादको आरोप लाग्ने गर्छ । परिवारवादको प्रभाव विश्व राजनीतिमै देखिन्छ । तर दक्षिण एसियाको
राजेश हमाल अहिले एपीवान टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘को बन्छ करोडपति’ सञ्चालन गरिरहेका छन् । सो कार्यक्रम होस्ट गर्नबाट बचेको समय उनी सामाजिक सेवामा सक्रिय हुने गरेका छन् ।यही बीचमा उनी विभिन्न व्यावसायिक कम्पनीले उतपादन
बुटवल । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयताको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएका छन् । मगर राष्ट्रिय परिषदको संघीय भेलाको शनिबार बुटवलमा उद्घाटन गर्दै भट्टराई प्रधानमन्त्री
भक्तपुर । पछिल्लो समयमा पछिल्लो समयमा चाँडै नाफा कमाउन खेती योग्य जग्गा खण्डिकरण र प्लटिङ गर्दै बेच्ने प्रवृत्ति बढेकोप्रति किसानहरु चिन्तित हुन थालेका छन् । भक्तपुरमा आयोजित कृषि मेला एवं प्रदर्शनीको समापनमा किसानहरुले